Linux Mint 18 "Sarah" ကိုသွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း Linux မှ
Linux Mint 18 "Sarah" ကိုသွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း
Luigys toro | | ဖြန့်ဝေ, GNU / Linux များ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ဒီနေ့ install လုပ်ပြီ Linux Mint 18 "Sarah" ကို Cinnamon Desktop Environment နှင့်အတူ, ပထမတစ်ချက်မှာ, ငါ့ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အတူအလွန်ကောင်းစွာနှင့်မည်သည့်ပြproblemနာမရှိဘဲပြုမူ, ဒီ distro ကြိုးစားချင်သောသူတို့အဘို့ငါလမ်းညွှန်စွန့်ခွာ ဘာလုပ်ရမလဲ Linux Mint 18 "Sarah" ကိုထည့်ပြီးနောက်.
ဒီလမ်းညွှန်ဟာကျွန်တော့်ရဲ့ Linux Mint 17 (ကျွန်တော်အချိန်ကြာမြင့်စွာကလွန်ခဲ့သောသုံးလ) ကလမ်းညွှန်အပြင်ထပ်ဆောင်းအတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံသည် ရဲ့ linux ကိုသုံးရအောင် နှင့် Ultimate Linux Mint ၁၈ de Erik dubois (ဒီကနေငါအများအပြား script များယူ။ ငါ့အကြိုက်သူတို့ကိုစိတ်ကြိုက်)
လမ်းညွှန်ပြီးဆုံးသွားပါကသင်၏ desktop သည်ဤနည်းအတိုင်းဖြစ်မည်၊ update လုပ်ပြီးသား၊ တည်ငြိမ်ပြီးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆော့ဖ်ဝဲလ်အမြောက်အများနှင့်အတူဤအရာအားလုံးသည်မြန်ဆန်စွာနှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာဖြစ်လိမ့်မည်။
2 Linux Mint 18 "Sarah" ကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်လုပ်ဆောင်ရန်အဆင့်များ
2.1 Update Manager ကို run ပါ
2.2 စီးပွားဖြစ်ယာဉ်မောင်းများကိုတပ်ဆင်ပါ (ဗီဒီယိုကဒ်၊ ကြိုးမဲ့စသည်)
2.4 ဘက်ထရီမန်နေဂျာကို Install လုပ်ပါ
2.5 git ထည့်သွင်းပါ
2.6.1 Linux Mint 18 အတွက်အကောင်းဆုံးအခင်းအကျင်းများကို install လုပ်ရန် Script
2.6.2 Linux Mint 18 အတွက်အကောင်းဆုံးအိုင်ကွန်များကို Install လုပ်ရန်
2.6.3 Theme နှင့် Icons များကိုရွေးချယ်ခြင်း
2.6.4 Linux Mint 18 အတွက်အကောင်းဆုံး conky configuration ကို install လုပ်ရန် Script
2.10 audio plugins များနှင့် equalizer ကို install လုပ်ပါ
Linux Mint 18 သည်များစွာသော development environment များပါ ၀ င်သည်။ ဤလမ်းညွှန်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်အများစုသည် desktops တစ်ခုစီနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
Linux Mint 18 "Sarah" ကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်လုပ်ဆောင်ရန်အဆင့်များ
ဤအဆင့်တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်ပြီးမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြပြီးပါပြီ၊ ထိုနည်းတူပင်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အရသာနှင့်အညီအချို့သောအရာများကိုလုပ်ဆောင်ရန်မလိုအပ်ပေ။ ဤလမ်းညွှန်သည်သင့်အားများစွာသက်သာစေလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင်၏ distro တည်ငြိမ်။ လှပမှုကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
Update Manager ကို run ပါ
စီးပွားဖြစ်ယာဉ်မောင်းများကိုတပ်ဆင်ပါ (ဗီဒီယိုကဒ်၊ ကြိုးမဲ့စသည်)
Preferences Menu> အပိုဆောင်း Drivers များတွင်ပြသနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်သို့မဟုတ်အခြားစက်ပစ္စည်း၏ပိုင်ရှင်ဒရိုင်ဘာကိုကျွန်ုပ်တို့ ပြောင်းလဲ၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဘက်ထရီမန်နေဂျာကို Install လုပ်ပါ
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏လက်ပ်တော့ပ်ပေါ်တွင် Linux Mint 18 ကိုသွင်းထားပါကသင့်အားသင်၏ဘက်ထရီအားသွင်းခြင်းနှင့်အားပြန်ထုတ်ခြင်းများကိုစီမံရန်ခွင့်ပြုမည့်ဘက်ထရီမန်နေဂျာကို install လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာရမည်။
Git ကို Linux Mint 18 တွင်တပ်ဆင်ရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်မှာသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။ အောက်ပါ command ကိုရေးရပါမည်။
သင်၏ Linux Mint 18 ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်များစွာသောအခမဲ့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အထူးသဖြင့်အရာများကိုတစ် ဦး တည်းတပ်ဆင်ရန်၊ စမ်းသပ်ရန်နှင့်စသည်တို့အတွက်အချိန်များစွာမရှိကြပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကို install လုပ်ရန်အတွက် scripts (၃) ခုအားသာချက်ရှိသည်။ အမျိုးမျိုးသော themes များ, icon များနှင့် conky များအတွက် setting များကို။
ရယူရန် အကောင်းဆုံးအခင်းအကျင်းများနှင့်အိုင်ကွန်များကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ရန် script၊ အခင်းအကျင်းတစ်ခုချင်းစီကိုသီးခြားစီထည့်သွင်းရန်အတွက် scripts များအပြင်နှစ်ခုလုံးပါ ၀ င်သော repository ကိုကျွန်ုပ်တို့ ထပ်၍ ကူးယူရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါ command ကိုလုပ်ဆောင်ရမည်။
Linux Mint 18 အတွက်အကောင်းဆုံးအခင်းအကျင်းများကို install လုပ်ရန် Script
ကို run ရန် script all-in-once-installation_deb_themes.sh, အဆိုပါ repository ကိုမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် themes-icon-pack.git ငါတို့ပုံတူပွားထားတယ်၊ ငါတို့ဟာပုံတူကူးယူထားသော directory မှအောက်ပါ script ကိုဤနည်းအတိုင်းလုပ်ဆောင်ရမည်။
ဤ script သည်အောက်ပါတို့ကိုအလိုအလျောက်ထည့်သွင်းလိမ့်မည် Linux Mint 18 အတွက်အခင်းအကျင်း
Arc Sun က
Ambiance Theme နှင့်အရောင်အရောင်များ
Arch Frost က GTK
Arch Frost GTK အမှောင်ထု
Ceti2အဓိကအကြောင်းအရာ
Vertex အခင်းအကျင်း (အမှောင်နှင့်အလင်း)
Linux Mint 18 အတွက်အကောင်းဆုံးအိုင်ကွန်များကို Install လုပ်ရန်
ကျနော်တို့ themes များနှင့်ပြုသကဲ့သို့, icon တွေကို install လုပ်ဖို့ကျနော်တို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်၏ directory ထဲတွင်နေရာချထားရမည်ဖြစ်သည် themes-icon-pack.git အောက်ပါ script ကို run ပါ။
ဤ script သည်အောက်ပါတို့ကိုအလိုအလျောက်ထည့်သွင်းလိမ့်မည် Linux Mint 18 အတွက် icon များ
Numix စက်ဝိုင်း icon များ
Superflat remix icon များ
Ultra ပြားချပ်ချပ် icon များ
Moka နှင့် Faba
Papirus အမှောင် Gtk
Theme နှင့် Icons များကိုရွေးချယ်ခြင်း
icon နှင့် theme pack ကိုသင်တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးချရန်မီနူးမှပြုလုပ်ရန်အသင့်တော်ဆုံးတစ်ခုကိုရွေးပါလိမ့်မည် «ခေါင်းစဉ်များ», Window Borders, Icons, Controls, Mouse Pointer နှင့် Desktop တို့ပေါင်းစပ်ထားပါတယ်။
သင်၏ desktop ကိုကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေလိုပါကအောက်ပါ configuration ကိုရွေးချယ်ရမည်။
linux mint themes များ 18
မှတ်သားသင့်သည်မှာနောင်တွင် icon များနှင့် themes များကို uninstall လုပ်လိုပါက cloned repository တွင်တွေ့ရသောအောက်ပါ script ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Linux Mint 18 အတွက်အကောင်းဆုံး conky configuration ကို install လုပ်ရန် Script
Conky သည်ကွန်ပျူတာမော်နီတာတစ်ခုဖြစ်ပြီး RAM memory, CPU အသုံးပြုမှု၊ system time စသည့်အစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြပေးသည်။ ကောင်းကျိုးကောင်းတစ်ခုမှာဤအပလီကေးရှင်းတွင်“ အရေခွံများ” များစွာရှိသည်။
ဤကိစ္စတွင်ငါကိုအသုံးပြုပါ Aura ကျွန်ုပ်တို့သည်တရားဝင် repository ကိုပုံတူကူးယူခြင်းအားဖြင့်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သောအလွန်ကောင်းမွန်သော conky configurations များစုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဖိုင်တွဲကိုဖွင့်ပြီးအောက်ပါ script ကို run ပါ
ဤ script သည် github မှစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး .aura folder (hidden folder) ကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။ နောက်မှ conky configuration များကိုရွေးချယ်နိုင်လျှင် create folder ထဲသို့ကျွန်ုပ်တို့သွားပါလိမ့်မည်
ဒီ directory ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ execute:
အရာနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း conky update လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် .aureola လမ်းညွှန်ကိုရယူပါက conky configuration အမျိုးမျိုးနှင့်ကိုက်ညီသော folders များကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သော folder ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ folder ကိုရိုက်ထည့်ပြီးအောက်ပါ command ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ./install-conky.sh အလိုအလြောကျအပေါငျးတို့သလိုအပ်သော setting များကိုစေမည်။
Halo တွင်ရရှိနိုင်သော conky configurations များသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
Halo - ပိုကီ
Halo - အယ်လ်ဗာ
ကျွန်ုပ်အတွက်ဤအရာများသည်ကျွန်ုပ်အမြဲထည့်သွင်းထားသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပရိုဂရမ်များဖြစ်သဖြင့်ကျွန်တော် script မှယူခဲ့သည် Erik dubois ငါကဒါကိုငါနှစ်သက်သလိုပြုပြင်ပြီးရင်အောက်ပါ application တွေကို install လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ ၎င်းကိုအလိုအလျောက် download ပြုလုပ်လိုပါကအောက်ပါ command ကိုလုပ်ဆောင်ရမည် (ကျွန်ုပ်တို့၏ paste မှ script ကို download လုပ်၍ ၎င်းသည် execute လုပ်ခွင့်ပြုချက်ပေးသည်နှင့် script ကို execute) ။
ကျွန်တော့်အတွက်တော့ဒါဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဂိမ်းကိုကြိုက်သူတွေအတွက်၊ repositories မှာရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့ library library အပြင်ငါတို့မှာလည်းရှိသည်။ http://www.playdeb.net/welcome/.deb packages များရှိ Linux system အတွက်ဂိမ်းများစုဆောင်းရန်အထူးပြုသည့်နောက်စာမျက်နှာတစ်ခု။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Windows ဂိမ်းများကိုပျော်မွေ့လိုပါကစိတ်ဓာတ်မကျပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အခြားနည်းလမ်းများရှိသည်။
4. ဝိုင်းကလပ် (http://wiki.winehq.org/winetricks) .NET Frameworks, DirectX စသည့် Linux ပေါ်တွင်ဂိမ်းများလည်ပတ်ရန်လိုအပ်သည့်စာကြည့်တိုက်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ကူညီသည့် script တစ်ခုအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
ဤပရိုဂရမ်အားလုံးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သက်ဆိုင်ရာတရားဝင်စာမျက်နှာများ၊ Linux Mint Programs manager သို့မဟုတ် terminal တွင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။ အလားတူစွာကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစာကိုဖတ်ရန်အထူးအကြံပြုလိုပါသည် နည်းပြဆရာ ၎င်းတို့သည်တစ်ခုချင်းစီကိုမည်သို့တပ်ဆင်မည်၊
Linux အတွက် Steam (http://store.steampowered.com/search/?os=linux)
ယခုအချိန်အတန်ကြာလျှင်၊ Steam ဂိမ်းပလက်ဖောင်းအားမူလအတိုင်းသုံးနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Linux တွင်အလုပ်လုပ်ရန်မူလကတီထွင်ထားသော Steam တွင်ဂိမ်းများတိုးများလာနေသည်။
Steam ကိုထည့်သွင်းရန် .deb ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ ရေနွေးငွေ့စာမျက်နှာ.
ထို့နောက်သူတို့ကအောက်ပါ command ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်:
ဖြစ်နိုင်သည်အချို့မှီခိုအမှားအယွင်းများ။ ရှိလျှင်၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အောက်ပါ command ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
sudo -f install apt-get
ထို့နောက်သင် Steam ကိုဖွင့်သောအခါ၊ ဒီမှာ Steam တွင် Linux ဂိမ်းများကိုတွေ့နိုင်သည်။
audio plugins များနှင့် equalizer ကို install လုပ်ပါ
1. Menu> Administration မှကျွန်ုပ်တို့ ၀ င်လာသည့် Program Manager တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့ရသောမည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုအတွက်မဆိုအလွန်များပြားသောပရိုဂရမ်များရှိသည်။ မန်နေဂျာကိုအမျိုးအစားအလိုက်စီစဉ်ပေးတယ်၊ အဲဒါကငါတို့လိုချင်တာကိုရှာဖွေနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောပရိုဂရမ်ကိုတွေ့ပြီဆိုလျှင်၊ install ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး Administrator ၏လျှို့ဝှက်စာကိုရိုက်ထည့်ရန်သာဖြစ်သည်။ မန်နေဂျာတ ဦး သည်တပြိုင်နက်တည်းလုပ်ဆောင်မည့် installation တန်းကိုပင်ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးနိုင်သည်။
2. Package Manager ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်မည်သည့် package ကိုကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်လိုသည်ကိုအတိအကျသိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်မည့် package အားလုံးကိုမသိလျှင်ပရိုဂရမ်များကိုခြစ်ရာမှ install ရန်အကြံမပြုထားပါ။
3. Terminal (Menu> Accessories) မှတစ်ဆင့် sudo apt-get install + program name ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ တခါတရံတွင် sudo apt-get ppa: + repository name နှင့်အတူယခင်က repository ကိုထပ်ထည့်ရမည်။ console ပါသော program တစ်ခုကိုရှာဖွေရန် apt search ကိုရိုက်နိုင်သည်။
သင်၏စနစ်ကိုအမြဲတမ်းမွမ်းမံရန်၊ သင်၏အကြိုက်ဆုံးဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုနှစ်သက်စွာစတင်ရန်၊ သင်လေ့လာသိရှိခဲ့ရာများကိုကမ္ဘာနှင့်မျှဝေရန်လည်းအကြံပြုသည်။
နောက်ဆုံးသင်လမ်းညွှန်ပေါ်တွင်သင်၏မှတ်ချက်များကိုစောင့်ဆိုင်းသည်။ Linux Mint 18 "Sarah" ကိုသွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » Linux Mint 18 "Sarah" ကိုသွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း
ဒါပေမယ့် Ubuntu ကို uninstall လုပ်ပြီးဒီ distro ကိုထားချင်တယ်။ ဒါဟာဗေဒအလွန်ကောင်းသောဖြစ်ပါတယ်။
ဆောင်းပါးအပေါ်ဂုဏ်ယူပါတယ်, နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဖိုရမ်။ အလွန်ကောင်းသောအလုပ်
၎င်းသည် Ubuntu ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ အသုံးပြုသူအသစ်များ (သို့မဟုတ် ၀ င်းဒိုးတွင်အသုံးပြုသူများ) အတွက်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။
ဒါမှမဟုတ် ၂၀၀၅ ခုနှစ်ကတည်းက linux လောကမှာသီးသန့်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ငါလိုလူတွေအတွက်ငါရွေးချယ်တာကငါ့ကိုအများဆုံးလွမ်းဆွတ်မှုပဲ။
desktop PC အတွက်အလွန်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာပြုမူခြင်း။ အလွန်ကောင်းတဲ့ပို့စ်။
တစ် ဦး conky uninstall ရန်?
သင်တစ် ဦး configuration ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ရည်ရွယ်ခဲ့လျှင်, အခြားရွေးချယ်ပါ, script ကိုအလိုအလျောက်ဖယ်ရှားနှင့်အသစ်တစ်ခုကိုနေရာချ
ဆိုလိုတာကဖိုလ်ဒါများကိုဖျက်ပစ်ခြင်း၊ ပုန်းအောင်းခြင်းနှင့်ပုန်းကွယ်ခြင်းကဲ့သို့ရိုးရှင်းလျှင်, သို့မဟုတ်သင်အခြားအရာတစ်ခုခုလုပ်ရန်လိုလျှင်ဆိုလိုတာ
linux mint အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးပြည့်စုံသောဆောင်းပါး။ ယခုလောလောဆယ်တွင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်မသုံးသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်အခြား linux ဖြန့်ချိမှုများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက် icon packs, fonts, conky configurations စသည်။
အဆိုပါလမ်းညွှန်အလွန်ကောင်းသောနှင့်ပြည့်စုံသည်။ ငါ့အတွက် Linuxmint ဟာငါ့အကြိုက်ဆုံး desktop ဖြစ်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကစပြီး Driver တွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ပြproblemsနာတွေကြောင့် Ubuntu Unity ကိုငါ install လုပ်ပြီး Mint Cinnamon ကိုပြန်ချင်တယ်။
ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ Sarah ကိုအလှဆင်ရန် Icons များထည့်သွင်းရန်ရှိသည်။ XD
ဒီဗားရှင်းကိုတပ်ဆင်ထားပြီးသားပါ။ အမှန်တရားကအရမ်းကောင်းနေပြီ၊ Ubuntu ငါရှိခဲ့ပေမယ့်အရမ်းလေးတယ်၊ ဒီတစ်ခုကအများကြီးပိုကောင်းတယ်။ ဒါတောင်မှ linux ထက် windows အတွက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ထားတာကိုသတိပြုမိဖို့လိုတယ်။ software ထုတ်လုပ်သူတွေဟာအနည်းငယ်ပိုအလုပ်လုပ်လားဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။
ငါ themes များ install လုပ်ဖို့ကြိုးစားငါကရ ။/all-in-once-installation_deb_themes.sh
bash: ./all-in-once-installation_deb_themes.sh: ဖိုင်သို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲမရှိပါ။
အဆိုပါ git ကိုယ်ပွား repository ကိုပုံတူပွားပြီးနောက် https://github.com/erikdubois/themes-icons-pack.git
သင် cd themes-icons-pack ကို scripts ဖြင့် directory ထဲတွင်ရှိရန်လုပ်ရမည်။ ထိုအချိန်တွင် execute ./all-in-once-installation_deb_themes.sh
ပရိုဂရမ်များကို install လုပ်ရန် script ကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားနေသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားအမှားတစ်ခုပေးနေသည် - "chmod: 'install-all-soft.sh' ကို ဝင်ရောက်၍ မရပါ။ ဖိုင်သို့မဟုတ်လမ်းညွှန်မရှိပါ။ " ပြသနာကဘယ်မှာလဲဆိုတာကိုသိအောင်ကူညီပေးတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ တစ် ဦး ကအလွန်အသုံးဝင်သောလမ်းညွှန်။
မေးခွန်းတစ်ခုမှာမင်းမှာ WhatsApp သုံးစွဲသူရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ဘာလဲဒါကိုငါတို့အားပြောပြနိုင်မလား။
မင်္ဂလာပါ။ သင်ခန်းစာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါဟာအရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။
မေးခွန်းတစ်ခု၊ မင်းမှာ WhatsApp သုံးစွဲသူရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ဘာလဲဒါကိုငါတို့အားပြောပြနိုင်မလား။
မင်္ဂလာပါ၊ သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုလမ်းညွှန်ပေးနိုင်မလားဆိုတာသိရန်မေးခွန်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။
1.- ကွန်ပြူတာကိုဖွင့်သောအခါ conky အလိုအလျောက်လည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက်မည်သည့်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံပြုလုပ်ရမည်နည်း။
2.- ဘယ် doky ကိုသင်အကြံပြုသလဲ။
၁။ Linux Mint menu မှသွားပါ aplicaciones al inicio, ထို့နောက်အမည်နှင့်အတူတ ဦး တည်းထည့်သွင်းပါ conky နှင့်အမိန့် conky
၂ ကောင်းပြီ၊ လူတိုင်း၏အရသာအတွက်ကျွန်ုပ်သည်ယခု Aureola - Poku ကိုအသုံးပြုသည်။ သို့သော်၎င်းသည်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ
မင်္ဂလာပါ၊ tutorial တွင်တွေ့ရသောနောက်ခံများကိုမည်သည့်နေရာမှကူးယူနိုင်ကြောင်းနှင့်အိုင်ကွန် themes များ linux mint 17 နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်အားပြောပြနိုင်ပါ။
အင်တာနက်ပေါ်တွင်သင်များစွာသောရန်ပုံငွေများရနိုင်သည်။ သင်ခန်းစာရှိသူများသည်သီးခြားသိုလှောင်ခန်းတွင်မရှိ။ သူတို့ဟာ Linux Mint 17 အတွက်အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်
Moses RO ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောလမ်းညွှန်ဖြစ်သည်။ မျှဝေခြင်းနှင့်သင်၏ကြီးမားသောလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ငါပြောပြသည်ငါ icon များနှင့် themes များဒေါင်းလုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရတယ်, ဒါပေမယ့် "Theme နှင့် icon များရွေးချယ်ခြင်း" အပိုင်း၌သင်တို့ကို -menu- ကိုသွားနှင့် -temi ကို select ရန်လိုအပ်ကြောင်းညွှန်ပြသငျသညျ, သို့သော်ငါ့အထဲတွင်ထိုကဲ့သို့သောရွေးချယ်စရာမရှိ စနစ်။ သိသာထင်ရှားသည့်မေးခွန်းမှာဤပရိုဂရမ်ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
ထိုအခါငါက "Software Manager ကို" ၌၎င်း, -apt install themes များနှင့်တိုက်ရိုက်တိုက်ရိုက်လည်းရှာဖွေခဲ့ - ဘာမျှမ။
OS- Mint 18 sarah
Kernel- x86_64 Linux 4.4.0-45-ယေဘူယျ
Shell: bash ၄.၃.၄၂
FROM မှ: XFCE
အကြောင်းအရာ - Mint-X
GTK အကြောင်းအရာ - Mint-X [GTK2]
စာလုံး: Noto Sans 9
CPU- Intel Core i5 CPU M 520 @ 2.394GHz
GPU: llvmpipe အပေါ်ဂယ်လီယမ် ၀.၄ (LLVM 0.4, 3.8-bit)
RAM ကို: 676MiB / 2000MiB
Moises RO သို့စာပြန်ပါ
Preferences မှမီနူးတွင်သင် Themes ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်၏တပ်ဆင်ခြင်းကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ထားလျှင်၎င်းသည် themes များဖြစ်နိုင်သည်
ချို့ယွင်းချက် - all-in-once-installation_deb_icons.sh
./all-in-once-installation_deb_icons.sh ကို fix
(ငါမှားသွားပြီ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာမသိခဲ့ဘူး၊ .aha haha)
စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ သင်ညွှန်ပြနေတဲ့အမှားအယွင်းများနဲ့အတူ "ဖိုင် (သို့) လမ်းညွှန်မရှိဘူး" ဆိုတဲ့အမှားတခုကိုငါရနေတယ်။
ဖာနန်ဒို Gonzalez placeholder ပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် LinuxMint ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်များစွာအထောက်အကူပြုသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တွင်ပြproblemနာတစ်ခုသာရှိသည်
ကျွန်ုပ်ဗီဒီယိုများဖွင့်သည့်အခါနှင့်ပြတင်းပေါက်များကိုရွေ့သောအခါရွေ့လျားပုံအချို့ကိုပြိုကွဲစေသောကောင်းသောရေပြင်ညီမျုိးများကျွန်တော်ရရှိသည်။ အဖြေကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ပါ။ ပြtheနာ၏အမည်ကိုမသိသောကြောင့်ဖြေရှင်းချက်ပေါ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ မင်းငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
ဖာနန်ဒို Gonzalez အားတုံ့ပြန်ပါ
ငါ့အဘို့အလုပ်မလုပ်: wget http://paste.desdelinux.net/?dl=5254 && chmod + x install-all-soft.sh && ./install-all-soft.sh သည်ဤအချက်ကို output: wget http://paste.desdelinux.net/?dl=5254 && chmod + x install-all-soft.sh && ./install-all-soft.sh
paste.desdelinux.net (paste.desdelinux.net) ကိုဖြေရှင်းခြင်း… 104.18.41.104, 104.18.40.104, 2400: cb00: 2048: 1 :: 6812: 2968, …
paste.desdelinux.net (paste.desdelinux.net) သို့ဆက်သွယ်ခြင်း | 104.18.41.104 |: 80 …ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။
တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ဆိုင်းနေပြီး HTTP တောင်းဆိုမှုသည်… 200 OK
အရှည်မသတ်မှတ်ရသေး [text / plain]
သိမ်းဆည်းခြင်း - 'index.html? dl = 5254.1'
index.html? dl = 5254 ။ [<=>] 4.51K –.- KB / s သည် 0s တွင်ရှိသည်
2016-11-15 21:38:27 (12.7 MB / s) - 'index.html dl = 5254.1' ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက် 
chmod: 'install-all-soft.sh' ကို ဝင်ရောက်၍ မရပါ။ ထိုကဲ့သို့သောဖိုင်သို့မဟုတ်လမ်းညွှန်မရှိပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အသစ်ဖြစ်ပြီးမေးခွန်းတစ်ခုရှိပါသည်။ ၎င်းသည် floating programs များပေါ်လာသည့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော menu သေးသေးလေးကိုဖန်တီးသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
၎င်းကို plank ကိုတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်ရရှိသည်: sudo apt-get install plank
ငါ Linux linux မှာစတင်ပြီးဒီ distro ကို install လုပ်လိုက်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကသူ့ရဲ့ပုံပန်းသဏ္appearanceာန်ကိုကြိုက်တယ်၊ ခင်ဗျားရဲ့စတင်ခြေလှမ်းတွေမှာပေါင်းထည့်တယ်၊ ဒါကငါ့အတွက်ပြီးပြည့်စုံတယ်။ အရာရာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ Ubuntu ပြproblemsနာများကြောင့်အခြားသောဖြန့်ဖြူးမှုများပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Mint ကိုတွေ့ပြီးငါ့ကိုojipláticoလုပ်လိုက်တယ်။ သူကတည်ငြိမ်ပြီးအလိုလိုသိတယ်။ (အထူးသဖြင့်ငါတို့စတင်ခါစ terminal ကိုမရဲရဲတဲ့သူတွေအတွက်) ပြီးပြည့်စုံတယ်။ ငါကြိုက်တယ်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည် Linux အသိုင်းအဝိုင်းကိုပိုချစ်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြproblemsနာများကိုအဖြေများအမြဲပေးသည်
အိုင်ဗင် Martinez ဟုသူကပြောသည်
ဤဆောင်းပါးသည်အလွန်ကောင်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တွင် Linux Mint 18 နှင့်တစ်လမျှသာမရှိ၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်အများဆုံးအလားအလာကိုရရှိနိုင်သည်။ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
Ivan Martinez အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ လမ်းညွှန်သည်အလွန်ကောင်းသော်လည်း conky ၏မြင်ကွင်းကိုကျွန်ုပ်အားမဖော်ပြပါ။ conky ၏အခင်းအကျင်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ် install လိုက်သောအခါကျွန်ုပ်အမှားတစ်ခုရလာသည်။
***** Imlib2 ရေးသားသူသတိပေးချက် *****:
ဒီအစီအစဉ်က Imlib ခေါ်ဆိုမှုကိုခေါ်နေသည်။
################### ပြီးပါပြီ #######################
သံသယမရှိဘဲအကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ပဲ၊ မင်းရဲ့အချိန်နဲ့မင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ Xubuntu ကိုနောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးဖို့စဉ်းစားနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်မင်းကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါငါစာရာကိုသုံးမယ်ထင်တယ်။
နှစ်ပေါင်းအနည်းငယ်ပျက်ကွက်ပြီးနောက် Linux သို့ပြန်လာခဲ့သောဖြုန်းတီးသောသားတစ် ဦး အားကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့သည်။
မစ္စတာ Normal မှတုံ့ပြန်ပါ
Gerardo Ramirez ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် - မင်းရဲ့အလှူငွေကပြီးပြည့်စုံတယ်
ငါ GIT တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်၏ခြေလှမ်းများအားလုံးလိုက်နာခဲ့သည်ကိုအလေးအနက်ပြောကြားလိုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားအမှားအယွင်းများမပေးနိုင်သော်လည်း preference - themes များထဲသို့ဝင်ရောက်စဉ်သူတို့သည် loaded မပေါ်လာပါ။
ငါ linux အတွက်လေ့လာသူပါ
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်ကိုအကြံပေးရန် (အခွင့်အရေးအလွဲသုံးစားမှုအတွက်စိတ်မကောင်းပါ) သင်အခွင့်အလမ်းယူရန်လိုအပ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ပရိုဂရမ်မာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Visual FoxPro ရှိ windows များအတွက်စနစ်များကိုကျွန်ုပ်စီမံသည်။ ဘယ်ဟာ windows ကို mount လုပ်ရန်နှင့်ငါ့ system ကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့ရန်အတွက်အကောင်းဆုံး virtualizer လဲ။ ဒါမှမဟုတ် virtualize မလုပ်နိုင်တဲ့နောက်တစ်ခု ...
Gerardo Ramirez ကိုပြန်ပြောပါ
ဆက်သွယ်မှုကိုစစ်ဆေး ... ပြီးပြီ။
« / tmp / papirus-icon-theme-kde »မှပုံတူကူးယူပါ
fatal: 'https://github.com/PapirusDevelopmentTeam/papirus-icon-theme-kde/' အတွက်စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းမအောင်မြင်ခဲ့ပါ
ရှာရန်: "/ tmp / papirus-icon-theme-kde": ဖိုင်သို့မဟုတ်လမ်းညွှန်မရှိပါ
cp: stat 'on' / tmp / papirus-icon-theme-kde / * 'မတည်နိုင်ပါ။ ဖိုင်သို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲမရှိပါ။
« / tmp / papirus-icon-theme-gtk »ထဲရှိ Clone ...
ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပါပဲ၊ github username နှင့် password ကိုမည်သည့်အရာကိုရေးရမည်ကိုမသိပါ။ သင်မည်သို့ဖြေရှင်းခဲ့သနည်း။
papirus pack လို့ခေါ်တဲ့ဒေါင်းလုပ်မလုပ်ဘူးလို့ထင်ပေမယ့် Enter ရိုက်ထည့်ပါ။
Felipe Zuniga ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ဒီ post ကကျွန်တော့်ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်။
ကိုယ့် Conky configuration နဲ့ပြwithနာတစ်ခုရှိတယ်။ အထူးသဖြင့် gambodekuno ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ၊ ကျွန်ုပ်သည်အဆင့်အားလုံးကိုလိုက်နာသည်။ သို့သော် conky ကို run သောအခါဖန်သားပြင်အနည်းငယ်မှေးမှိန်သွားပြီး "Aureola Gamnodeku v1.7.7" နှင့်အခြားဘာမျှမပါသည့်စာသားကိုသာငါမြင်နိုင်သည်။
ငါအရင်ကထည့်ပြီးပြီ၊ အားလုံးအဆင်ပြေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါ့ system ကိုပြန် install လုပ်တယ်။ ဘာမှားနေပါသလဲ?
wget သည် http://paste.desdelinux.net/?dl=5254 && chmod + x install-all-soft.sh && ./install-all-soft.sh
paste.desdelinux.net (paste.desdelinux.net) ကိုဖြေရှင်းခြင်း… 104.18.40.104, 104.18.41.104, 2400: cb00: 2048: 1 :: 6812: 2968, …
paste.desdelinux.net (paste.desdelinux.net) နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း [104.18.40.104]: 80 …ချိတ်ဆက်ထားသည်။
တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ဆိုင်းနေပြီး HTTP တောင်းဆိုမှု ... 200 OK
မှတ်တမ်းတင်ခြင်း: "index.html? dl = 5254.2"
index.html? dl = 5254.2 [<=>] 4.51K –.- KB / s ကို 0.003s မှာ
2017-11-07 16:46:33 (1.39 MB / s) - "index.html dl = 5254.2" ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက် 
chmod: 'install-all-soft.sh' ကိုကြည့်ရှု။ မရပါ။ ဖိုင်သို့မဟုတ်လမ်းညွှန်မရှိပါ
JOSE ALBERTO သို့ပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်သည် desktop နှင့် icon themes များကို command ဖြင့်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးစားသောအခါအလုပ်မလုပ်ပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် Linux lint mint 18 ကိုသာ install လုပ်ပြီး win10 နှင့်ပတ်သက်လျှင်ပထမ operating system ကိုအလွန်သိချင်ပါသည်
ပုံနှိပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းပါသည်၊ ကျွန်ုပ် ဆက်လက်၍ ဆက်လက်လေ့လာပါလိမ့်မည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၌ဤ script ၏ပြproblemနာအနည်းငယ်ရှိသည်၊ ရှင်းပြပါရစေ။
ပြproblemနာတစ်ခုရှိသေးတယ်၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပရိုဂရမ်များအတွက် script ကို download လုပ်ရန်ကြိုးစားသောအခါ၊ wget: host“ paste.fromlinux.net” ၏လိပ်စာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါ။
နှင့် script များကို linux mint 19 တွင်တပ်ဆင်ပြီး၎င်းတွင်အကြောင်းအရာများ မှလွဲ၍ အခြားအကြောင်းအရာများမရှိပါ။ ၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ သို့မဟုတ် gnome tweak tools သို့မဟုတ်အလားတူ tool တစ်ခုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသလား။
ငါနောက်ခံ Aureola - Poku ကြိုက်တယ်, သင်ကအဓိကအကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြနိုင်မလား
Round: Linux Mint အတွက်အလင်းနှင့်လှပသော Login Screen တစ်ခု
CentOS / Debian / Ubuntu တွင် LAMP ကိုအလိုအလျောက်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း